भरतपुर अस्पतालमा थपियो सय आइसोलेसन बेड – Health Post Nepal
२०७७ भदौ १८ गते १६:१३
चितवन स्थित भरतपुर अस्पतालले आइसोलेसनको शैया विस्तार गरेको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि भरतपुर अस्पतालले १ सय शैया आइसोलेसन विस्तार गर्दै १७५ शैया आईसोलेसन पु¥याएको हो ।
यसअघि अस्पतालमा ७५ शैया सञ्चालनमा थियो । कोरोना संक्रमितलाई उपचारमा सहजताका लागि आइसोलेसनको शैया विस्तार गरिएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा.भोजराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘आइतबारदेखि विस्तार भएका सबै आइसोलेसनमा बिरामी राख्ने काम सुरु हुनेछ, उनले भने, ‘अब संक्रमितले शैया नपाउने समस्या हल हुनेछ ।’
उनका अनुसार, थप भएका आइसोलेसन शैयामा साधारण संक्रमितका लागि ३५, संक्रमित कर्मचारी तथा चिकित्सकका लागि २४, परीक्षणका क्रममा शंकास्पद देखिएकालाई ३५ बेड विस्तार गरिएको छ ।
यस्तै,आकस्मिक कक्ष (आइसीयु) मा थप ६ बेड आइसोलेसन गरिनेछ । यसअघि आइसोलेसनमा १० शैया राखिएको थियो । डा. अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट, विभागिय प्रमुखहरु सहभागि थिए ।
स्टाफ तथा कर्मचारीलाई निर्माणाधिन कुरुवा घरमा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन मिलाइएको छ । यसमा ४८ बेड हुनेछ । अभजरवेसन वार्डमा शंकास्पद बिरामीलाई, सर्जिकल वार्डमा संक्रमण पुष्टी भएकालाई छुट्टै आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अस्पतालले कोरोना संक्रमण भएकाको अप्रेशनका लागि छुटै अप्रशेन थियटर समेत सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
संक्रमित महिलाबाट जन्मेका बच्चा राख्न छुटै एनआइसीयुको व्यवस्था मिलाइएको छ । निषेधाज्ञा खुलेमा बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै आलोपाले प्रणालीमा बहिरंग (ओपिडी) सेवा सञ्चालन गर्ने योजना समेत बनाएको छ ।
सबै विभागका चिकित्सकको आलोपालो गरी सिमित संख्यामा बिरामीलाई सामाजिक दुरी कायम राख्दै उपचार गर्ने योजना बनाएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले एकिकृत आकस्मिक सेवालाई निरन्तरता दिदै आइरहेको छ ।
यसअघि आकस्मिक कक्षमा पछि आएका बिरामी र पुराना बिरामी एकै ठाउँमाहुने अवस्था हटाउन आकस्मिक कक्षमा छुटै ४ बेड तयार पारेको छ । ‘संक्रमणकै कारण उपचार पाइएन भन्ने गुनासो अब हट्ने विश्वास लिएका छौँ, डा. अधिकारीले भने, ‘सहजरुपमा सबै बिरामीले उपचार दिन भरतपुर अस्पताल सधै तत्पर छ ।’
समुदायमा कोरोना फैलिसकेकाले कोभिड–१९ पोजिटिभ देखिएका प्रसुती लगायत सवै अप्रेसन गर्न मिल्ने आकास्मिक कोभिड–१९ पोजिटिभ शल्यक्रिया कक्ष र कर्मचारी कोठा सञ्चालमा ल्याउने उनले बताए ।
लकडाउन खुलेपछि एकीकृत आकस्मिक सेवालाई नर्मल ओपिडि सेवा दिने गरि विभागको विरामी संख्या स्वास्थ्यकर्मी र समयको कोटा छुट्टाएर सामाजिक दुरी कायम गर्न र संक्रमण फैलन नदिनका लागि प्रयास गर्ने अस्पतालले बताएको छ ।
यस्तै अस्पतालले कर्मचारीका लागि विरामी कुरुवा घरमा एक महिना भित्र क्वारेन्टाईनको निर्माण गर्न भएको छ ।